Dlulisela noma kusuka eBasel & Zurich Airport | Isevisi e-Switzerland yonkana
Isevisi yokudlulisa iBasel, isevisi yakho yokuthutha noma kusuka ezikhungweni zezindiza zaseBasel naseZurich. Switzerland.
Amanani alungile aqinisekisiwe, ushayele ngaphandle kwesibopho noma usebenzise ifomu lethu lokuxhumana ngezansi.
Hlela manje futhi ukhokhe ngemuva kokuhamba.
(Sizophendula phakathi kwehora le-1.)
Ingabe ufuna ukudluliselwa kwezindiza eBasel noma eZurich? Khona-ke silindele ukuzwa kusuka kuwe.
Sihlanganisa induduzo yensizakalo yetekisi enokwethenjelwa ngomuzwa omuhle wokuthutha okuhle kwe-limousine service yethu.
Sizokujabulela ukukushayela ukufaka imithwalo eya eBasel Airport noma kwenye indawo eSwitzerland. Wamukelekile ukusitshela ngefomu lokuthintana nesifiso sakho ngabanye.
isibonelo iBasel City Airport Basel Chf 40.-
Ukudluliselwa kwezindiza okuqala futhi okungabizi kakhulu eBasel naseZurich
Isevisi yethu yokudlulisa isikhumulo sezindiza ku-Airport Basel ikuthatha ngokushesha futhi ngokuphepha ephepheni lakho noma libuyele edolobheni. Ikakhulukazi esikhumulweni sezindiza ngokuvamile uhamba kahle futhi ngubani ohamba njalo, uyazi ukuthi ukusesha isikhala sokupaka esikhumulweni sezindiza kungabonakali kanjani. Thina njengezinkampani zetekisi sikunikeza isixazululo ngenkonzo yethu yokuthutha i-shuttle ukuze uhambisane kahle futhi ungahambisani nokuhamba esikhumulweni sezindiza.
Ukudluliselwa kwezindiza ngetekisi ukuya esikhumulweni sezindiza phesheya
Ngaphezu kwalokho, sikudlulisela kwezinye izindawo eSwitzerland naseFrance neJalimane. Nakuba i-Basel Airport inkulu, ayinikezi njalo uxhumano lwendiza olufunayo. Kungase kube usizo ukuqala esikhumulweni sezindiza esiseduze. Sikuyisa eZurich Airport noma emazweni angomakhelwane ngaphandle kwenkinga, isibonelo ku-Airport Stuttgart noma isikhungo se-European Frankfurt am Main.
Thintana nathi ngokuhamba ngezinyawo, kungakhathaliseki ukuthi uhamba ngasese futhi uhlala eholidini eSwitzerland, noma uhamba ibhizinisi eSwitzerland ngebhizinisi.
Isevisi yethu yamatekisi
Uhlala eBasel futhi ungathanda inkonzo yethu yokudlulisela i-shuttle I-Airport Basel Incwadi? Ayikho inkinga, sithwele abantu abangu-7 ebhasini lamatekisi ngesikhathi esifanayo kubandakanya imithwalo eya esikhumulweni sezindiza eBasel, Zurich, Geneva noma phesheya. Sikulethela ngokunethezeka futhi ngezikhathi ezithile esikhumulweni sezindiza.
Insizakalo yabagibeli nezinkampani
Siphinde sibheke amaphrojekthi ezinkampani ezinkulu, abasebenzi bakho isibonelo ehhotela eBasel futhi badinga ukuthuthela kwelinye idolobha, isibonelo Zurich, Noma kufanele uhambe njalo futhi uhambise umzila ofanayo nsuku zonke ngaphakathi kweBasel. Singumlingani wakho ofanelekayo ekuthuthweni kwabaxhasi bezinkampani eSwitzerland nakwezokuthutha kwezindiza.
Sitshele noma usithumelele i-SMS bese ucela izintengo zethu ezihleliwe esizinikezayo.
Isevisi yakho yokudlulisa i-shuttle Basel.
Izinzuzo Zokudlulisa Insiza:
Kungakhathaliseki ukuthi umuntu we-1 noma abantu abangu-7, njalo kunenani eliphansi elifanayo
Kulula kakhulu Zurich Airport, Basel, Geneva kanye nokuhamba phesheya
Azikho izindleko ezifihliwe, zonke izintengo ezihleliwe
Awekho izinkokhelo uma ukhokha ngekhadi lesikweletu
Umlingani onekhono nenkonzo
Sishayela ngenombolo elandelayo:
Ucingo: + 41 78 861 35 50